09.05.2020 Category: Herramientas web
Newe mawebsite ane mabhiriyoni ari paInternet nhasi, sewe muridzi weimwe nzvimbo, unogona kunge uchifunga kuti hapana mikana yakawanda yokuti cybercriminal inogona kutora yako. Zvisinei, tisati tasvika pane izvozvo, ngatidzokerei kwekanguva tigofunga kuti webhusaiti yako inorevei kwauri.
Sezvo iwe uri munhu, unogona kungova wega webhusaiti yega o kunyange bhizinesi rebhizimisi rekuInternet kuti iwe unofunga hauna hanya. Iko kune kukosha mune zvose uye kunyange nzvimbo ine zvinyorwa inobata mamwe marudzi e data. Zvichida zita rekutumidzwa nephasiwedi yaunoshandisa pane dzose dzekombiyuta yako yepaIndaneti? Kana iwe uine bhizinesi duku, webhusaiti yako inomirira mararamiro ako uye mukurumbira, pamwe chete nematoni ehumwe ruzivo rwekukosha huri wega chete, asiwo vatengi vako.
Los cibercriminales haazofungi kana webhusaiti yako iri duku, vanoshandisa zvishandiso zvinoshandisa kusununguka kuongorora nzvimbo yese yavanosangana nayo, kungounganidza mashoko. Kana vasingakwanisi kushandisa ruzivo, vanogona kutengesa kune mumwe munhu anogona.
2.1 Chinyorwa 7 DDoS Kudzivirira Certificado SSL Apoyo Prueba gratis 30 mazuva 30 mazuva 30 mazuva Shanyira paIndaneti: Incapsula.com 3. Cloudflare
Iva nechokwadi chekuti nzvimbo yako yepaiti uye chero zvinyorwa zvese zvauri kuita zviri kusvika. Zvose mapurogiramu anozivikanwa kuvanhu anotasunungurwa nemabhugi uye zvinogona kuitika kuchengeteka. Kunyange izvo izvo zvichengetedzwa zvinongororwa zvichave nezvisungo izvi. Zvose zvinotora ndezvekushaya njodzi uye ma-cibercriminales achakwanisa kuwana. Nokuva nechokwadi chokuti iwe unogadzira zvigadziriswa nguva dzose, mikana yekuchengetedzwa kwekuchengetedzwa kwekushandisa kushandiswa inoderedzwa.
Kuti utange iwe kubva, edza LastPass, Dashlane o KeePass. Vamwe vakasununguka, vamwe havasi.
Zvimwe, vazhinji vanoita alojamiento web vakadai se A2Hosting uye SiteGround uyewo shandisa sewechitatu-zvekare mutengesi zvakare uye anogona kuzvitengesa kwauri.
Zvichiitika, kunyange kana iwe usiri kuzoshanda sitio de comercio electrónico, makambani ewebhu nhasi anotarisira kunze kwekuchengeteka zvakare.
Certificado SSL Apoyo
Prueba gratis 30 mazuva 30 mazuva 30 mazuva
Cloudflare inonyanya kuzivikanwa nemazita seC Content Distribution Network (CDN), iyo inonyanya kukosha iyo yakavaka zita rakasimba mukuchengetedza vatengi masayiti pakurwiswa kweEspecial denegación de servicio (DDoS). Zvakare, kufanana neIncapsula, Cloudflare mutengo wekutengeserana kwepamusoro pane zvakanyanya kuvharika.
Newewebsite ane mabhiriyoni ari paInternet nhasi, sew muridzi weimwe nzvimbo, unogona kunge uchifunga kuti
WHSR Twitter Chat Recap: Blog Hacking Growth rast in zaslužite nasvete
15 тем WordPress для створення готових мобільних сайтів